Kooxaha Man United iyo Paris Saint-German oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Real Madrid – Gool FM
(Yurub) 05 Agoosto 2020. Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada ka soo baxa dalka Spain kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-German ayaa ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Real Madrid.
Xiddiga reer Colombia ee James Rodríguez ayaa ku dhow inuu ka tago kooxda Real Madrid inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
James Rodríguez ayaa qandaraaska uu ku joogo kooxda Real Madrid waxaa kaga harsan hal xilli ciyaareed, iyadoo laga war qabo inuu xilli hore ka baxay qorshaha tababare Zinedine Zidane.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain kooxda Paris Saint-German ayaa si xoogan ugu soo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa James Rodríguez, si ay u hesho adeegiisa xagaagan.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in wakiilka James Rodríguez ee Jorge Mendes uu u bandhigay adeega laacibka reer Colombia kooxda Paris Saint-Germain, xilli kooxda reer France ay soo dhaweysay arrintaas.
Wargeyska “Marca” ayaa wuxuu xaqiijiyay in Real Madrid ay dul dhigtay James Rodríguez qiimo dhan 35 million euros si ay kaga fasaxdo garoonka Santiago bernabeu.
Waxaa xusid mudan in Manchester United ay ka soo gudbisay xiddigan qiimo dhan 25 million euros, balse waxaa hadda la aamisan yahay in kooxda Paris Saint-Germain ay diyaar u tahay inay ka soo baxdo codsiga Los Blancos.